Mere Coinbase ebubo na nke overloading na Bitcoin netwọk na otú SegWit ọrụ ? - Blockchain News
Na otú ọtụtụ Coinbase injinia na-mkpa ịme SegWit.
on February 5, na Coinbase Cryptocurrency mgbanwe enịm a tweet, agwa na “mmepe otu bụ ikpeazụ ogbo nke ule SegWit”, na “izipụ na inweta bitcoins na SegWit support ga-abụ dị a izu ole na ole”.
Coinbase mara ọkwa ọrụ na SegWit n'oge December afọ gara aga, ịza otu n'ime ugboro ugboro jụrụ ajụjụ site na ọrụ “otú ọtụtụ Coinbase injinia na-mkpa ịme SegWit.”
on December 16, Coinbase osote president Dan Romero bipụtara a post ke ukara Coinbase blog, agwa na iwebata SegWit na-zubere maka 2018, na na oge na otu bụ “arụ ọrụ na-adịghị ize ndụ, mmejuputa iwu nke SegWit.” Romero akowaputa na “na mkpa – nche na oru oma ọrụ mgbanwe”, na-adịghị asụ banyere kpọmkwem okwu.
Otú ọ dị, na-efegharị efegharị nke December “Bitcoin Mania”, ọrụ discontent na-eto na netwọk si busyness: mgbanwe, tinyere Coinbase na GDAX, abụghị ike ịnagide ndekọ ina wee offline, ụgwọ na azụmahịa nkwenye oge nọ na-amụba. Ke ufọt ufọt January, ahịa zitere Coinbase CEO Bryan Armstrong a aririọ-anakọtara karịa 12,000 edebe ụbọchị izu, akpọ maka nkwado maka SegWit dị ka a mkpa n'ihi na 2018. Jameson Race, na-eduga na engineer nke BitGo kaadị wallet, kpọ gbahapụrụ nke Coinbase ọrụ: “Ọ bụghị a chọpụtara na a ịrịba akpata overloads na Bitcoin netwọk e mere site dị otú ahụ na-ewu ewu ọrụ dị ka Blockchain.info, Coinbase na Gemini, nke inefficiently iji ngọngọ ohere. Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka na-eme ka a, -adịghị eji ya. ” Armstrong ọzọ zara-ndebe, na-ekwu na “Coinbase na-arụ ọrụ na packetizing azụmahịa, SegWit na a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ azum iwepụ ọnọdụ na-achọghị na netwọk.”
SegWit Aims dozie scalability nsogbu site na mbenata na size nke azụmahịa. The protocol e chọrọ site Mmepụta nke Blockstream Peter Wellle, na softphone na ka o kwe omume iji SegWit, wee ebe ke netwọk Bitcoin na August afọ gara aga. Otu n'ime ihe ndị ọrụ na-ama na-akwado nkà na ụzụ – wallets Ledger, mma, Electrum na Samourai obere akpa, nakwa dị ka kaadị-mgbanwe HitBTC, ShapeShift na Bitstamp. Iji ghọta otú SegWit enyere ndị Bitcoin netwọk, ọ dị mkpa iche na mfe larịị-ahụ kwa ụbọchị na-eme nke bitcoin-azụmahịa na njem site na Bitcoin network n'ụdị “ozi ngwugwu”, na ịbụ eziokwu ha na izi ezi na-enyocha site ọnụ. Ọ bụrụ na niile ọnụ na-ekweta na azụmahịa bụ ziri ezi, mgbe a na otutu mmadu kwenyere na-ruru. The azụmahịa onwe ya mejupụtara abụọ akụkụ: ọsọ ọsọ na-mmepụta – “input” na “Ụzọ ọpụpụ”, site na nke akụkụ mbụ bụ maka “Ịkpọghe”, na bụ, inweta bitcoins (na e dere ozi banyere sender), na nke abụọ – maka “kpochidoro” maka nwere n'ọdịnihu Mbupu. The input data nwekwara a mbinye aka Certifying ndị ozi nke onwe na ọha igodo.
SegWit technology (Segregated Onyeàmà) gbawara azụmahịa abụọ akụkụ na Nyefe mbinye aka (“àmà”) mkpa iji “Ị kpọghee ekwt” ndị nwetara bitcoins, na njedebe nke azụmahịa, n'èzí isi ngọngọ. N'okwu a, isi unit nwere data banyere nnata na sender, na “àmà” nwere scripts na edebe ụbọchị izu, na bụ, ozi na dị mkpa iji gosi na azụmahịa, ma mgbe ahụ dịghị mgbe a ga-eji. Ewere n'ime akaụntụ na edebe ụbọchị izu na-arụ banyere 60% nke azụmahịa olu, ha iche budata ebelata ngọngọ size, si otú amụba netwọk bandwit ma mbenata na-eri nke azụmahịa ebubo.
IGBOB now enyekwara a myri ...
Previous Post:Coincheck ọkwa refunds amalite izu
Next Post:Mario Draghi: Bitcoin ụkpụrụ bụghị ECB si ibu ọrụ
these details kwuru:
Ka 3, 2018 na 7:15 AM